BRAHMA WAA CADDAAN: ASALKA, MUUQAALKA, CALAAMADAHA AH EE DIGAAGGA, FAA'IIDOOYINKA IYO KHASAAROOYINKA, DAYACTIRKA IYO DARYEELKA, SAWIRRADA - BEERAHA DIGAAGA
Caleenta digaaga Brahma waa mid cad: muuqaalka, sawir, sifooyinka daryeelka
Beeralayda digaaga, labadaba kuwa cusub iyo kuwa sare, waxay had iyo jeer raadiyaan nuucyada ugu haboon ee xaaladaha dayactirka iyo daryeelka gurigooda.
In this article waxaan ka wada hadli doonaa sida noocyada digaagga sida Brahma waa caddaan.
Tani waa ma aha oo kaliya wax soo saar leh, laakiin sidoo kale aad u soo jiidasho leh oo ka soo jeeda arimaha dibadda.
Caanahan ayaa waxaa lagu xayiray midabyo Maraykan ah iyaga oo ka gudbay jilayada Cochinchins iyo Chittagongs. Waxay magacooda ku magacaabeen Chittagong, laakiin magacan uma aysan dhicin shimbirta, sidaas darteed waxaa la siiyey magaca Brama. Inta lagu jiro xulashada, dhowr nooc ayaa lagu guuleystay taranta, mid ka mid ah waa Brahma cad, sida shimbirta ugu quruxda badan oo xiiso leh muuqaalka laga soo bixiyay bred.
Muuqaal, calaamadaha caleemaha
Digaaggaasi waxay leeyihiin muuqaal cajiib ah, sidaa daraadeed way adagtahay in lagu jahwareeriyo ilmo kale. Midabka duufaantu waa baraf-caddaan, waxaa jiri kara baal madow ee dabada, qaybta qulqulka iyo lugaha. Daboolka qaabka fanaanku waa mid cidhiidhi ah, bacriminta ciriiriga ah waxaa loo tixgeliyaa calaamad muujinaysa taranka, sababtoo ah asal ahaan waxa laga soo qaaday taranka si loogu noolaado cimilada qabow.
Shimbirta lafteeda waa mid weyn oo wayn, taas oo ka caawisa inay sheegto xuquuqdeeda dhulka ama ka ilaalinta qoysaska kuwa danbi-doonka ah. Jidhka Brahma waa mid aad u sarreeya, sidaas darteed si sahlan ayaa loogu aqoonsan karaa dadweynaha guud ee shimbiraha. Cagaarshowgu waa yar yahay, ilkaha ku yaala maaha sida loogu dhawaaqo sida noocyada kale. Midabka indhaha waa orange quruxsan. Hayso lafo kobcaysa.
DAREEN! Guurka tan caanahaan waxaa loo tixgeliyaa yellowness of baadad, iyo sidoo kale maqnaanshaha baaluq on lugaha!
Kala duwanaanta noocyada kale ee digaagga
Farqiga ugu muhiimsan iyo kan ugu weyn wuxuu noqon doonaa Kaliya tufaaxan ee Bram ayaa bilaabi doona in la xadeeyo xilliga jiilaalka qabow. Tani waxay noqon doontaa faa'iido fiican gobollada qabow ee dalalka, maadaama ay shimbiruhu dareemaan raaxo leh heer-kuleylka hoose iyo waxay sii wadi karaan inay si fiican u ruxaan.
Hoos waxaa ku qoran sawirrada sawirada.
Astaamaha iyo tirada
Dabeecadda, taranka waxaa lagu kala duwan yahay nasiib darada deriska, ku xirnaanta mulkiilaha, dabeecada degan iyo aamusnaan leh. Raggu marnaba ma dagaalami doonaan xubnaha kale ee caanaha ah haddii aysan jirin wax halis ah digaag iyo digaagiisa.
Shimbiraha dhaadheer waxay noqon karaan digaag qurux badan waxayna digaagga si taxaddar leh u daryeeli doonaan. Dhammaan noocyada kala duwan ee noocaan ah waxay leeyihiin qiyaaso la mid ah kuwa la midka ah:
Digaagga qaangaarka ah ma gaadho wax ka badan 3.5 kg, iyo raga ma dhaafaan 4.5 kg.
Wax-soo-saarka ukun hooseeya wuxuu kudhowaad yahay 120 xabbo sannadkii.
Ukuntu waa dhexdhexaad iyo cabbir ka yar 60 garaam.
Hooska dheriga ah ee ukunta.
Xilliga ukunta wax soo saarku wuxuu dhacayaa waqti dambe marka la barbardhigo noocyada kale ee 8 - 9 bilood.
Markaad dhadhamiso, hilibka Brahma waxaa lagu qeexi karaa sida jilicsan, xoogaa yar, laakiin casiir leh, midab leh oo dufan dhexdhexaad ah.
Iyadoo ay ku xiran tahay sida ay ukumuhu u korayaan, wax soo saarkooda ukumaha ayaa hoos u dhigi doona illaa 3 sano, iyo da'da shan sano ee hen ma qaadi doonaan in ka badan 60 ukumood sanadkiiba.
Faa'iidooyinka noocaan ah waxaa ka mid ah:
Muuqaal qurux badan.
Si aan kala go 'lahayn loo dhigo ukumaha, xitaa xilliga qaboobaha, si ka duwan noocyada kale ee loo yaqaan, qaboojinta waa diiqada ugu xoogan.
Aan la qabin xaaladaha xabsiga.
Uma baahnid coop weyn oo lugo iyo digaag.
Frost-resistant, taas oo loogu talagalay Siberia iyo Ural waa sifooyin aan loo dulqaadan karin.
Digaagga waa digaag wanaagsan.
Faa'iidooyinka caanahan waxaa ka mid ah:
Qiimaha sare ee iibsiga digaagga.
Hawl korodhka dambe ee waxqabadka taranka.
Celceliska tirada ukunta ee sanadkiiba.
Waxay u nugul yihiin cayilku sababtoo ah dheef-shiid kiimikaad hooseeya, sidaa daraadeed waa mid aan loo baahnayn in kor loo qaado shimbirta. Tan waxaa laga yaabaa in la qaado ama in yar, guud ahaan, si loo joojiyo.
Dayactirka iyo daryeelka - muuqaalada
Si loo ilaaliyo muuqaalka soo jiidashada ee Brahma, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo hoyga iyo meesha loogu talagalay socodka waqtiga. Wixii nadiif ah ee naaso gaar ah, beeralayda digaagga ee waayo-aragnimo ah kuma talin in dhawr dhawr nooc oo digaag ah lagu hayo qol isku mid ah. Cawska digaaga ee Bram waa inay la mid noqdaan noocyada kale.
Waxaa jiri doona xayndaab, hudheello, qufac iyo cabitaan. Dibnaha waa inay ahaadaan sida shimbir weyn oo ku raaxeysan karto. Dhererka heerkulka dabaqa ah waa ugu yaraan 40 cm, ballaadhkeedana waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30 cm Si ay shimbirta si fiican u qaadato waxaa lagama maarmaan u ah in lagu daro caleemaha digaaga xiliga qaboobaha, marka uu mugdi ku dhaco wax ka badan xagaaga.
Wixii soo saarka ukunta ee ugu wanaagsan, Brahma waxay u baahan tahay maalin nalalka 13-14 saacadood ah. Intaa waxaa dheer, coop ee xilliga qaboobaha lama kululayn karo, haddii ay jiraan shimbiro dhowr ah oo ku yaal coop, iyo derbiyada ayaa lagu daray xayndaab.
Caawin! Tani waxay ku haboon tahay qafis, sidaas awgeed xagaaga waxa fiican in la siiyo xayeysi bilaash ah.
Dhammaan siyaabaha kale, digaagga ayaa ku kala duwan mawduucooda laga helo noocyada kale, Tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee hab-nololeedyada wanaagsani waa:
Qalab digaag ah oo qallalan, nadiif ah.
Bixinta hawo wanaagsan.
Feed Brahm waa in lagu dheellitiraa, maadaama ay tani tahay mid ka mid ah cayayaanka si fudud u heli kara "miisaanka waxyeellada leh" kaas oo ka joojiya soo rogashada. Cuntada waa in ay ku jiraan cuntada qoyan iyo qalalan. Xilliga xagaaga, waxaa wanaagsan in la siiyo digaagga leh cawska cusub ee la jarjaray, iyo xilliga qaboobaha - hay ah.
Quudi shimbiraha saddex jeer maalintiiXaaladdan oo kale, quraacdu waxay ka kooban tahay isku dar ah hadhuudh, qadada cuntada qoyan iyo cawska, iyo casho qoyan qallalan, taas oo ka wanaagsan in lagu kala firdhiyo dabaqa, sidaas darteed shimbirta waxay u guuri kartaa dheeraad ah iyaga oo ka soo qaadaya abuurka dhulka.
Tani waxay u egtahay, sida kuwa kale, waxay si farxad leh u quudinayaan cayayaanka, digaaga ama ukunta ant, taas oo ay ka hesho borotiinka uu u baahan yahay, xididdada, dhirta, caleemaha geedaha, berry iyo khudaarta. Shimbirku waa inuu helaa bilaash ah biyo nadiif ah, iyo waliba macdano isku dhafan oo kala duwan, sida dhagax weyn oo dhagax ah, cunto lafo ama cunto kalluun.
Xilliga jiilaalka, cawska cusub waa la bedeli karaa ma aha oo kaliya hay, laakiin sidoo kale caleemaha cawska ama burka cawska. Dhalinyarada waa in lagu quudiyo fiitamiino dheeri ah si ay digaagu u yeeshaan dhakhso ah oo ay u bilaabaan hababka difaaca.
Xaaladaha qaarkood, digaagga ayaa u muuqda in ay jeexaan ukumahooda. Tani waxay dhacdaa haddii shimbiruhu ka maqan yahay walax kasta oo jidhka ah. Tani badanaaba waa borotiin ama kalsiyum. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo shimbirtaas kuna quudiso faytamiin ku habboon.
MUHIIM! Cockerels, iyo sidoo kale digaagga, sidoo kale laguma dhaafi karo sababtoo ah waxay isla markiiba saameyn doontaa nidaamka taranka. Tayada dheecaanka nukanka ah ayaa si wayn u sii xumaan kara, natiijadaasna, bacriminta ukumaha ayaa hoos u dhigi kara.
Nuqul ka mid ah shimbirtani ma noqon doonto mid adag, tan iyo markii uu jirku leeyahay bacriminta sare iyo heerka badbaadada. Waxaad u iibsan kartaa ukun si aad iskugu xoqdo, iibsato maalin-jir ama digaago koray, ama iibso shakhsiyaad dhalinyaro ah. Doorashadii ugu dambaysay waa midka ugu caansan, tan iyo Brahma lafteedu waa shimbir qaali ah, iyo digaagga koraya iyo qolfuhu waxay ku kici doonaan wax ka badan digaagga ama ukunta.
Laakiin haddii aad markaa iibsato tani, ka dibna markaa maahan inaadan helin shakhsiyaad cusub, maxaa yeelay digaagga ayaa awood u yeelanaya in ay ukortaan ukunta naftooda oo ay koraan jiil cusub. Si aad u kiciso ukumahaagu waxay dooran kartaa cabbirka ugu weyn.
Chicks kuwaas oo la rijeynayo in ka yar Juun laga yaabo inay u dhintaan xilliga qaboobaha sababtoo ah caafimaad xumo iyo koritaanka gaaban ee laftiisa.
Brahma waa caddaan - nooc jilicsan oo digaag ah, isku darsiga samaawiga, nabadgelyo, saaxiibtinimo iyo jacaylka milkiilaha iyo guriga. Sicirka qiimaha sarreeya wuxuu bixiyaa dabeecadda iyo muuqaalka digaagga sida. Dhabarku waa ka wanaagsan yahay Brahma inaanu helin, sidaas darteed ha ka murugoonin dhaqaalaha iyo iibsashada this ee digaagga.